बीउ संकलन र भण्डारण केन्द्र स्थापना
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ फलातेमा बीउ संकलन र भण्डारण केन्द्र स्थापना भएको छ । गाउँपालिका र किसानको संयुक्त लगानीमा रायो सागको बीउ संकलन र भण्डारण केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्र स्थापना भएपछि घर–घरमै गएर बीउ संकलन र व्यक्तिका घरमा भण्डारण गर्नुपर्ने समस्या हटेको उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन पुर्जाले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको रू. ८ लाख ८१ हजार ५४६, उपभोक्ताको रू. ५ लाख बराबरको श्रमदान र गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पाउने सुविधाबापतको रकम संकलन गरेर बनाएको कोषबाट रू. ५० हजार गरी कुल रू. १४ लाख ३१ हजार ५४६ लागतमा सो केन्द्र स्थापना भएका छन् ।
सन्ताउन्न घरधुरीले १३ दिनका दरले श्रमदान गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खमबहादुर पुर्जाले बताए । स्तरोन्नति गरेर कोल्डस्टोरसमेत बनाउन सकिने यो भवन बहुप्रयोजन र बहुउद्देश्यीय किसिमको भएको गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर ईश्वरबहादुर भण्डारीले बताए । किसानहरूले बीउ, तरकारी र आलु संकलन तथा भण्डारणका अतिरिक्त शीपमूलक तालीम, बैठक, भेला सञ्चालनमा पनि यो भवनलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन् । व्यावसायिक रूपमा आलुखेतीको प्रशस्त सम्भावना भएको फलातेका साथै चित्रे, खिवाङ, कुटुका र महभीर गाउँका किसानले व्यावसायिक रूपमा मार्फा रायो जातको सागको बीउ उत्पादन गर्छन् । यस वर्ष प्रतिकिलो रू. ८ सयका दरले २६ क्विन्टल रायो सागको बीउ फलातेबाट निकासी भएको थियो । ताजा तरकारी र खाद्यबालीको तुलनामा आर्थिक हिसाबले बढी फाइदा हुने, बजारमा भनेको मूल्य पाउने भएकाले रायो सागको बीउ उत्पादनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । गाउँका सबैले बीउ उत्पादन गर्न सागखेती गरेका छन् ।
एउटा घरले थोरैमा २० केजीदेखि १०० केजीसम्म बीउ उत्पादन गर्छन् । गत वर्षसम्म पोखरा र चितवनका व्यापारी गाउँमै आएर बीउ खरिद गरेर लैजाने गरे पनि यसपालि कोरोनाका कारण बजारको समस्या देखिएकोमा किसान चिन्तित भएका छन् । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीले अनुकूल हावापानी, वातावरण र भूगोल भएकाले खिवाङ र फलाते क्षेत्रलाई सागको बीउ उत्पादन केन्द्र बनाउन सिफारिश गरेको थियो । कोदो, आलु, मकैको विकल्पमा सागखेती गरेका छन् ।
२ हजार मिटर उचाइको भूगोल मार्फा रायो सागको बीउ उत्पादनका लागि अनुकूल मानिएको छ । भदौमा बीउ, असोजमा बिरुवा रोपेपछि असारमा बीउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । बीउ उत्पादन गर्ने सागको पात टिप्न मिल्दैन । ठूला र चौडा पात हुने मार्फा रायो साग मुस्ताङको मार्फा शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले विकास गरेको हो । बीउ भण्डारण गर्ने मेटलबिन, सुकाउने त्रिपाल र बाली बीमाको सुविधा आवश्यक रहेको किसानले बताएका छन् । रासस
तस्वीर : अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट देखिएको माछापुच्छ्रे हिमाल
तस्वीर : रातोढुंगामा निर्माणाधीन विद्युत् सव स्टेशन
माउण्टेन इनर्जीको आईपीओ बुधवार बाँडफाँट हुँदै